TTSweet: ငါးထမင်းချဉ် ၊ ထမင်းဆိမ့် ...
Posted by T T Sweet at 8:55 AM
စားချင်လိုက်တာ.. မကြိုက်ပေမဲ့ ..စားချင်တယ်။
subuueain June 17, 2010 at 10:10 AM
seabass ငါးနဲ့မုန့်ဟင်းခါးချက်လို့ရတာမသိဘူးတီဆွိရေ.. ပုံလေးတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ ငါးထမင်းကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တာမို့ သွားရည်ကျ သွားပါတယ်။ :)
စန္ဒကူး June 17, 2010 at 10:50 AM
စိမ်းလမ်းစိုပြေမှာစားဖူးတယ်.. မလုပ်တတ်လို့သာ မစားဖြစ်တာ..
ဒီတစ်ခေါက် မြန်မာတွေစုပီးစားသောက်ပွဲလုပ်ရင် ငါးထမင်းချဉ်လုပ်စားမယ်။ recipe အတွက်ကျေးဇူးတီဆွိ..
ပူးတေ June 17, 2010 at 11:01 AM
breakfast မစားရသေးခင် မမဘလော့ကို အရင်ဦးဆုံးဝင်ကြည့်လိုက်တာ တော်တော်လေး ဗိုက်ဆာသွားတယ်.... ရှမ်းအစားစာဆို အားလုံးကြိုက်တယ်... မြီးရှည် တို့ဟူနွေး သုံးထပ်သားပေါင်း အဲဒါတွေလဲ စားချင်တယ်....
စုဗူးအိမ်နဲ့တူတူပဲ seabass ကို မုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် ကောင်းမယ်မထင်လို့ NTUC က ငါးရွှေပဲဝယ်ဝယ်ပြီးချက်တယ်...ဒီတခါ စမ်းချက်ကြည့်ဦးမယ်
sea bass = ကကတစ်
Anonymous June 17, 2010 at 11:35 AM
ကျောက်ကျော မပါဘူး :(
:P June 17, 2010 at 11:39 AM
ငါးခူတွေလည်း 1kg ကို ၆ ကျပ်၊ ၇ ကျပ်လောက်ပဲ ရှိတယ်။
shwezinu June 17, 2010 at 12:55 PM
စားချင်စရာ ငါးထမင်းချဉ်လေးပါ ချစ်ချစ်ကြီးအကြိုက်ပေါ့ အာလူးထမင်း လည်း အဲဒီအတိုင်းဘဲလုပ်တယ်
shwezinu June 17, 2010 at 1:05 PM
tt sweet ရေ sorry ဘဲ
ကော်နက်ရှင်မကောင်း တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး
လသာည June 17, 2010 at 2:05 PM
ငါးထမင်းချဉ် ? စားချင်လိုက်တာ....
ငါးက အဲဒီငါးကိုပဲ ချက်လို့ရတာလားဟင်..။ ဒီမှာ အဲဒီငါး ၀ယ်မရတဲ့အခါ တခြားငါးရှိရင် သုံးရအောင်လို့လေ..။
လုပ်နည်းလေးကို သေချာကော်ပီကူး။ ပရင့်ထုတ်သိမ်းထားတယ်။ နောက်ကျရင် လုပ်စားဖို့း))))
T T Sweet June 17, 2010 at 3:07 PM
ရွှေစင်ရေ ... never mind ... အစ်မပြန်ဖျက်လိုက်ပြီ ...
ဘယ်လိုဖြစ်လည်း မသိဘူးနော် ...
ရွှေစင်က ချစ်ချစ်ကြီးအတွက် အိမ်မှာ ချက်နေကျနဲ့တူတယ်နော်။
အပေါ်က အမည်မသိကတော့ ရွာသားလား ... ပုလုလားမသိဘူး ... ဒီကျောက်ကျောဇာတ်လမ်းကို သိတာ ...၂ယောက်လုံးပျောက်နေကြတယ်။ ကြုံတိုင်းရွာက လူပ်ျိုကြီးတွေလို ပုတ်ထဲ ၀င်ပုန်းနေကြလားမသိ ...အန်တီသက်ဝေရေ ...
မြတ်နိူးရေ ... စလုံးလာရင်တော့ ချက်ကျွေးမှာပေါ့ ... လာခဲ့ပါ ... တစ်ခြား ဘလော့ဂါတွေပါဖိတ်လိုက်မယ် ...
ငါးခူက ဒီမှာ အရှင်တွေကို သတ်လို့ မချက်ရဲဘူး။ seabass နဲ့ချက်တာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါးများရင် အချိုမှုန့်တောင်လုံးဝမသုံးရဘူး။ အရမ်းချိုတယ်။
seabass ကို ကကတစ်ခေါ်မှန်း ခုမှသိတယ်။ ကျေးဇူးနော်။
ပူးတေ ငါ့ညီမ ... ဒီတစ်ခါ seabass နဲ့ ချက်ကြည့်ပါလား။ အစ်မတော့ စလုံးရောက်ကတည်းက ဒီငါးပဲ သုံးတာများတယ်။
လသာညရေ ... seabass မရှိလဲ ချိုတဲ့ငါး ဘယ်ငါးမဆိုရပါတယ်။ အစ်မစိတ်ကြိုက်ငါးကို ပြောတာပါ။ ဒီ့ထက်ဈေးကြီးပြီး ကောင်းတာတွေလဲ ရှိတာပဲ။ seabass မှာတစ်ခုကောင်းတာက ငါးအသားက အမျှင်မကြီးဘူး။ အရမ်းလဲနူးညံ့တယ်။ ငါးကြင်းနဲ့ နဲနဲဆင်တယ်ထင်တာပဲ။
:P June 17, 2010 at 3:11 PM
ဟီး .... ပူးတေမဟုတ်ဘူးအစ်မ..
Bukit Gombak MRT ရှေ့က wet market မှာ ငါးခူ အသေတွေ၇ှိတယ်။ အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်လို ခပ်ရွယ်ရွယ်ပဲ ။
တီဆွိ အဲ့ဒါလေ ထမင်းအလုံးပျောက်တဲ့ထိ လက်ဖနောင့်နဲ့ဖိဖိပြီး ... စေးနေအောင်နယ်ရင်ပိုစားကောင်းတယ်ဗျ..
ဟီးးးးးးးး အလျာဝင်ရှည်ကြည့်တာ ..
T T Sweet June 17, 2010 at 3:22 PM
လူက အားမသန်လို့ အရမ်းကြေတဲ့အထိ မနယ်နိူင်လို့ တော်ရုံပဲ နယ်ထားတာပါ။ နောက်တစ်ခါ အိမ်ကလူကြီင်္းကို လုပ်အားပေးခိုင်းရမယ် ...း)
SDL ရေ ... ငါးသလောက်ရော ရလားဟင် ...အဲဒီ wet market မှာ ... ငါးသလောက်ပေါင်း စားချင်လို့ ....
myomonyeeoo June 17, 2010 at 6:44 PM
i donk know how2cook. thank u4sharing ur recipe. i ll try it later.
Anonymous June 17, 2010 at 6:59 PM
FYI - snake head fish = ငါးရံ့ 
You can buy in Shen Siong Supermarket. They sell small မုန်လာဥ with leaves like Myanmar. ငါးရံ့ မုန်လာဥချဉ်ရေ ချက်စားကြည့်ပါလား Yummy..Yummy.
Sorry for mixed writing. My burmese typing very slow. :)
သိင်္ဂါကျော် June 17, 2010 at 7:17 PM
စားချင်စရာလေး.. ခုလို ညနေလေး စားလိုက်ရရင် ရှယ်ပဲ..
တန်ခူး June 17, 2010 at 10:08 PM
သုငယ်ချင်းရေ... အရင်က ကထိန်ဆို ငါးထမင်းနယ်နဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲရောင်းနေကျဆိုတော့ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး လွမ်းသွားတယ်... စက်တင်ဘာလောက်ဆို သူငယ်ချင်းတို့ အိမ်နားပြောင်းလာတော့မှာဆိုတော့ တခုခုဆို လက်တို့ လိုက်နော်... စားဖို့ ဆိုရှေ့ ဆုံးက
သက်ဝေ June 17, 2010 at 10:21 PM
ငါးထမင်းနယ်ကို ကိုယ်ကတော့ Dori Fillet နဲ့ ချက်တယ်...
မနက်က ဗိုက်ဆာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စားစရာကို အခုလို တခန်းတနား တွေ့ရတော့ ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး အဟီး... (မအားလို့ လုပ်မစားရတာ ကြာနေပြီ...)
ပြီးတော့ တန်ခူးနဲ့ ကလဲ အိမ်နီးသွားဘီ ဆိုတာ မနာလိုဖြစ်နေတာ...
အရေးထဲ ဟို အမည်မသိလေးကလဲ ကျောက်ကျောဇာတ်လမ်း လာစ ထားတယ်... အမည်မသိတဲ့သူတွေ ရိုက်ပစ် တီဆွိ...း))
(အကုန်လုံး စုပေါင်း စိတ်တိုသွားသည်...)
Touch Me Not June 17, 2010 at 10:58 PM
မိုးခါး June 17, 2010 at 11:36 PM
ဂလု ဂလု ဂလု ..
ငါးထမင်းချဉ် ကြိုက်တယ်အစ်မရေ .. :D
သက်ဝေ June 18, 2010 at 1:11 AM
ခုနက ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ တခေါက်ပြန်လာတယ်...
ငါးသလောက် စားချင်ရင် Giant (IMM) နဲ့ Shen Siong မှာ ဝယ်ပါ...
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရာကို ယုံကြည်တယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ...း))
ကိုသီဟရွှေကို သတိရလိုက်တာ :((
T T Sweet June 18, 2010 at 11:10 AM
ဟားဟား ... ဒေါ်ဆွိတီတို့ ကံကောင်းချက် ... အန်တီသက်ဝေက ၀ယ်ပေးရုံမကဘူး ... ပေါင်းပါပေးဦးမှာတဲ့။ သူ့မှာ Pressure cooker ကြီးရှိတာ ခုမှ သတိရတယ် ...
ငါးသလောက်အရင်ကတော့ wet market မှာ တွေ့တွေ့နေတာ။ အဲဒီတုံးက မစားချင်ဘူး။ ခုစားချင်တော့ ရှာမရတော့ဘူး။ ငါးသလောက်ပေါ်ချိန်မဟုတ်လို့လားလို့။ဒီတစ်ပတ် အန်တီသက်ဝေပြောတဲ့ဆိုင်တွေ ပတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ... အိမ်မှာတော့ slow cooker နဲ့ပဲပေါင်းရမှာ ...
ချစ်ကြည်အေး June 18, 2010 at 4:07 PM
မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ချေဘူး...တီဆွိအိမ်နားပြောင်းလာနေဖို့ တကယ့်ကို လက်ပေါ် နဖူး၊ နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီးကို စဉ်းစားရတော့မယ်....ဟီးဟီး...:P
khin oo may June 19, 2010 at 12:59 PM
စူးနှယျလေး June 19, 2010 at 4:59 PM
အဆာပလာ စုံစုံလေး လုပ်ထားတာပဲ
Seabass = ကက်ကတစ်